Vista's Colorful Planet: ဘုရားပေါ်က စာစုများ
ဖျက်လို့ ဖျက်ဆီး လျှောက်ရေးနေကြတယ် ဘယ်သူကများ ထွင်လိုက်ပါလိမ့်
ဟားဟား ရီတာ့လို လူတွေနဲ့ တူတယ်။ အမယ် အရေးထဲ မမကွန်က မနာလို ဖြစ်နေသေး
တို့တွေ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားရင် ရေးတတ်တယ် ဆုတောင်းတော့ဟုတ်ဘူး ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်သူတွေနဲ့ရောက်တယ်ပေါ့ ဘယ်လိုပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကို ကော်ရက်ရှင်ပန်နဲ့ရေးတာလေ လှော်ကားဥယျာဉ်ကြီး သက်သေတည်ပါတယ်ကွယ်....ဟိ
ကျောက်စာ မင်စာ အုတ်ခွက်စာ ပေပုရပိုက်စာ ပုံနှိပ်စာ အခုတော့ ခုံစာတွေတိုးနေပြီ။
forget about Burma.
Click here. This is in Rome main rail station